Muxuu yahay meydka ninkan ay Seynis yahannada adduunka gacanta ka taageen? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka KAZAKH TV
Image caption "Ninka dahabiga ah" ayaa la rumeysan yahay inuu ahaa dagaal yahan ka soo jeeda qowmiyadda Scythian
Khubarada ku xeel dheer taariikhda bani'aadamka ayaa haraadiga meydkaas soo qufay sannadkii 1969-kii, waxayna qabrigii uu ku jiray ka soo saareen dahab aad u fara badan, kaasoo ka sameysnaa gaashaanka iyo hubka kale ee uu isticmaali jiray dagaal yahankaasi.
'Nabad ku Naso'
Image caption Dalxiiseyaal fara badan ayaa ugu imaan jiray daawasho
Kartoonkaas ayey dusha uga qorneyd "Ninkii dahabiga ahaa, Nabad ku Naso".
Waan ognahay in da'diisa iyo jinsiga uu yahay la heli doono, iyadoo Tijaabada hidda sidaha DNA ay na siin doonto macluumaad buuxa," ayuu yiri cilmi baare lagu magacaabo Dosym Zikiriya oo la hadlay warbaahinta Kazakh TV.
Balse Yermek Zhasybayev, oo ka howl gala madxafka Issyk Museum ayaa isla telefishinkaas u sheegay in rajo aad u kooban laga qabo arrintaas. "Lafahan aad bay u hallaabeen. Muddo 50 sano ah ayaa lagu dhex hayay kartoon caadi ah oo afka ka bannaan, waxaana galay bakteeriyo iyo feyrus. Hadda suuragal ma aha in DNA ay soo saarto macluumaad - waxaa fiicnaan lahayd inaan heli karno qalfoofta madaxa ama hal ilig xitaa".
Image caption Haraadiga lafaha ayaa la aasi doonaa sannadkan